Accueil > Gazetin'ny nosy > INTY SY NDAY: Sady tsy mahay no tsy menatra !
INTY SY NDAY: Sady tsy mahay no tsy menatra !
Maro no nanongilan-tsofina tamin’ny lahateny nifandimbiasana teny Mavoloha omaly, nandritra ny lanonan’ny Asaramanitry ny taona vaovao 2018. Nandrasan’ny maro ny an’ny filohampirenena. Aoka hotsorina fa dia poaka aty ny zavatra nambarany satria mifanohitra amin’ny zava-misy iainan’ny vahoaka ny fitanisana isan-karazany. Efa resahin’ny lahatsoratra iray ato amin’ity laharan-hgazety ity ny filazan’ny filoha izay miendrika fandatsana, momba ny hoe « nihena ho ny 72%-n’ny malagasy ny tahan’ny vahoaka miaina ao ambany fetra farany ambanin’ny fahantrana raha 92% izany tamin’ny 2014 ». Fandatsana izany ho an’ny maro satria sady nihombo ny isan’ny mahantra no nihamafy ny vaikan’ny fahantrana tany anivon’ny tokantrano malagasy.
Etsy ankilany, niaiky anefa izy fa « tsy mbola tonga any andovian’ny malagasy ny akon’ny fandrosoana vita ». Ilay fandrosoana mihitsy aloha no tsy nisy, ary raha ny lojikan’ny lahateniny dia tsy maintsy tsapan’ny malagasy ilay fihatsaram-piainany raha nisy tokoa. Izany hoe tsy maintsy tonga tany an-dovia.
Ivon’ny fahombiazana mantsy, hoy Ingahy Filoha Rajaonarimampianina ny taona 2017 satria avy any anatin’ny hantsan’ny fahantrana no miarin-doha ny firenena
Andaniny koa anefa dia nanantena ny mpiasampanjakana fa hisy ny fanondrotana ny karamany satria latsaka ambany loatra ny fahafahany mihetsika, indrindra koa fa tsy nitsaha-nidangana ny vidim-piainana ary tsy nitsaha-nitotongana ny sandan’ny vola malagasy. Tsy nisy izany fanondrotan-karama izany, raha ny kabary omaly.
Ireo olona nania teo anivon’ny fiaraha-monina koa ka voasazin’ny lalàna famaizana izay nieritreritra ny hisitraka famindram-po (grâce présidentielle) avy amin’ny filohampirenena amin’ny tonon-taona tahaka izao ; dia nangaina.
Ny antoka sy toky mba nandrandrain’ny mpandraharaha ara-toekarena malagasy fa mba handraisan’ny fanjakana fepetra ho fampiroboroboana azy dia tsy nasian’ny filohampirenena resaka.
Ny fanindraindrana ny fiaraha-miasa amin’ny any ivelany izay efa voaporofo fa fototry ny fampahantrana ny malagasy nandritra ny 57 taona no mbola navoitrany sy nafantsiny tao an-tsain’ny vahoaka malagasy omaly.
Isan’ny nomarihin’Ingahy filohampirenena koa omaly ny hoe « vao miarian-doha ny firenentsika dia midaraboka ». Milaza ankolaka izany ary tena manome tsiny ny vahoaka izay nijoro nitaky ny zony sy ny anjara-masoandrony tamin’ireo hetsi-bahoaka nitranga teto amin’ny tany sy ny firenena.
Nanara-davahana an’ireo mpitondra nifandimby teto i Hery Rajaonarimampianina omaly ny amin’ny tsy nahasahiany mihitsy nanasongadina ny lanjan’ny hetsi-bahoaka nisy teto, ary tsy nanana fahasahiana koa izy namatotra andraikitra tamin’ireo rehetra nandray sy nitantana ny fahefam-panjakana taorian’ny tolona nahabe voninahitra ny vahoaka malagasy teto ho tompon’antoka tamin’ny fampahantrana hatrany ny vahoaka sy fahapotehan’ny toekarena hatrany teto. Na ny fifidianana nanandratana ny mpitondra teto aza dia tsy tokony hadinoina fa niainga hatrany tamin’ny hetsi-bahoaka, ary isan’izany Ingahy Rajaonarimampianina, saingy navilin-dry zalahy lalana hiazo ny tombontsoany manokana sy nanomezany vahana ny vahiny nandroba harena teto hatrany moa ny fahefam-pânjakana nomen’ny vahoaka azy ireny, na hetsi-bahoaka nahazoany an’ilay fahefana na fifidianana. Tena sady tsy mahay no tsy menatra, hoy ny tanora.